Meelaha dalxiis ee loo dalxiis tago waxay bilaabaan inay markale dib uga furmaan Hindiya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Meelaha dalxiis ee loo dalxiis tago waxay bilaabaan inay markale dib uga furmaan Hindiya
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Goobihii dalxiis ee Hindiya oo dib loo furay
Taj Mahal iyo taallooyin kale oo taariikhi ah oo ku yaal Agra, India, ayaa dib loo furi doonaa dalxiisayaasha bisha Juun 16, 2021, ka dib markii uu xirnaa in ka badan 2 bilood sababo la xiriira kororka kiisaska COVID-19 intii lagu jiray mowjaddii labaad ee cudurka faafa ee coronavirus.
Taj Mahal waxaa loo xiray dalxiisayaasha 4tii Abriil, markii mowjadda labaad ay bilaabatay inay kacdo.
Sahanka Qadiimiga ah ee Hindiya (ASI) wuxuu go'aansaday inuu dib u furo taallooyinkii ay kormeerayeen maaddaama mowjaddii labaad ay dalka oo dhan dib uga dhacday.
Go'aanka ugu dambeeya waxaa loo daayay dowladaha gobolka iyo garsoorayaasha degmooyinkooda oo ku hoos yaal xukunka.
Garsooraha Dagmada Agra Prabhu N Singh ayaa xaqiijiyay inuu ka helay ogeysiiska ASI una gudbiyay dawlada gobolka, kana codsaday tilmaamo goorta taalada dib loo furayo. Tilmaamaha dib loo eegay ayaa la filayaa inay yimaadaan Talaadada.
Taj Mahal ayaa u xirnaa dalxiisayaasha muddo ku dhow 200 maalmood 2020-21 ka hor intaan dib loo furin Abriil 4. Xiritaanka ayaa si baaxad leh u dhacay dalxiiska deegaanka iyo hoteelada.
Milkiilayaasha hudheellada caanka ah ee Agra ayaa u sheegay India Today TV in warshadaha hudheelku jilbaha u dhacayeen 16-17kii bilood ee la soo dhaafay. Shaqaalaha hudheelka ayaa si dhib yar wax ugu xoqaya shaqo la'aan. Waxay ka cawdeen in Xarunta iyo dawladda gobolkuba aysan ka warqabin dhibaatadooda.
Dalxiisayaasha gudaha waxay dib ugu laaban karaan Agra hadii Taj Mahal dib u furmo June 16. Tan waxaa lafilayaa inay soo nooleyso dhaqaalaha maxaliga ah ee Agra, kaasoo aad ugu tiirsan dalxiiska Taj Mahal.